About Us - Dongguan Baoteng milina Co., Ltd.
Ny orinasa manararaotra maka ny 13 taona matihanina fitaovana rafitra lubrication varotra sy ny mpanamboatra mpanamboatra zava-nitranga sy ny teknolojia, ary miara-miasa amin'ny malaza indrindra Taiwan rafitra lubrication raharaha ho mavitrika hanatanteraka ny asa fikarohana. amin'ny dia asao hamorona vokatra mba hitarika ny hoavy lubrication orinasa fironana sy manompo isan-karazany mpanjifa noho ny lubrication vahaolana
Ny orinasa dia manana varotra feno kokoa ny tambajotra, miaraka Dongguan, Tianjin, Shenyang, Suzhou, XI an, Jinan birao sy ny varotra na ny tompon'andraikitra, ary nanohy ny hanitatra tsena ao an-toerana sy vahiny. fivarotana baovao (vokatra sasany no naondrana tany Alemaina, Indonezia, Vietnam, Iran sy ny firenena hafa). dia toy izany no mba hanome mpanjifa miaraka amin'ny be fitiavana kokoa sy matihanina fanompoana
Baoteng manana orinasa miasa ankehitriny enina foibe, anisan'izany ny olona loharanon-karena foibe,-barotra foibe, fitaovana foibe, foibe ara-bola, ny fikarohana sy ny fampandrosoana foibe, mpanamboatra foibe sy ny kalitao foibe. Efa nanorina toetra fitantanana, ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa, ny tontolo iainana sy ny rafitra fitantanana penitra. Ny rafitra fitantanana feno dia nifindra tsikelikely mankany amin'ny Modular fitantanana ny tarika. Ny siansa sy ny rafitra fitantanana henjana sy ny talenta ekipa matihanina no namela-fototra mafy ho an'ny Baoteng ny fandidiana. Ny orinasa dia manana talenta tsara rafitra fambolena sy mandrisika rafitra, mametraka sy manatanteraka salantsalany sy maharitra stratejika drafitra, ary miezaka ny hanao tsara Baoteng orinasa kolontsaina.
Mpiasa rehetra ny BAOTN nandray anjara
Misy mpiasa sy ny fianakaviany ao amin'ny BAOTN Tsidika ho any Beijing
Misy mpiasa sy ny fianakaviany ao amin'ny BAOTN Tsidika ho any Yunnan
● Enterprise fahitana: Aoka ary ho ekena ho toy ny orinasa izay manome kilasy voalohany lubrication fitaovana rafitra sy ny asa!
● Enterprise iraka: hamorona kalitao ny vokatra, mba hahazoana mpanjifa fifaninanana iraisam-pirenena!
● Core soatoavina: Customer nifantoka: Raiso ho toy ny misambo-pototry! Business filozofia: Base amin'ny tsy fivadihana sy ny kalitao!
● Management filozofia: fiaraha-miasa, fahombiazana, hatsaram-panahy!
● Quality foto-kevitra: Quality no tena fanajana, ary izany no fototry ny velona!
Izahay nanorina ankehitriny matihanina famokarana base in Dongguan Shina, ny fanafarana vaovao rafitra fitantanana ny mahia famokarana, manatsara mpanamboatra dingana sy ny fampidirana ny iraisam-pirenena nandroso fari-alemà tamin'ny laser fanapahana milina, Amada sy CNC totohondriny asa fanaovan-gazety ao Japana, mu rata taratasy vy fikarakarana fitaovana orinasa, mba hanorina vonona ny hilefitra famokarana paika sy rafitra siantifika kalitao fanomezan-toky. Tsy miantehitra amin'ny fanazavana mandroso haavon'ny haingana mba hanamorana ny fanatanterahana ny baiko mazava fikarakarana, miaraka mitohy hampivoarana ny tena, mbola hanafohezany ny famokarana tsingerin'ny, orinasa mpamokatra entana matanjaka fahaizany antoka mafy noho ny fanaterana ny vokatra haingana.
Manual Lubrication Pump , High-Quality Electric Gear Oil Pump, Electric Gear solika Pump , Timing Lubrication Pump , Automatic Lubrication Pump , Plastic Small hydraulic Pump , rehetra Products